इन्द्रेणी बिवा,दबारे टिका सानुले पहिलो पटक मिडियामा बोलिन् । के कृष्ण कडेंलसँग सम्बन्ध बिग्रि;एको हो ? (हेर्नुस् भि’डियो) – Ap Nepal
इन्द्रेणी कार्यक्रममा बोलेको एक अभिव्यक्तिका कारण बिवादमा रहेकी टिका सानुले यस्तो भनेकी छिन् । टिकाले कृष्ण कडेंलसँग सम्बन्ध बिग्रिएको हो या हैन, प्रष्ट पारेकी छिन् । टिकाले लेखेकी छिन्, सबैमा नमस्कार।
नचाहँदा नचाहँदै पनि केही कुरा लेख्नै पर्ने भयो। कार्यक्रम इन्द्रेणीसँग प्राय व्यक्तिहरु परिचित हुनुहुनु हुन्छ। यस कार्यक्रमको गरिमा, चर्चा, परिचर्चा, विश्वास र यस कार्यक्रमको अभियानका बारेमा जति प्रशंसा गरेपनि कम हुन्छ।
म त्यहि कामगर्छु भन्दा झन् गर्व लाग्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियोको अंशलाई लिएर जुन चर्चा र मेरो आलोचना भइरहेको छ। यसमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ।
उक्त भिडियोमा मैले बोलेका केही राम्रा कुराहरु थिए। बिडम्बना ति कुराहरु सबै आएको पाएको छैन। जुन कुरा भाइरल भएका छन्, ति कुराहरु प्रचार गर्न लायक छैनन्। तर, त्यो भिडियोमा सोझो रुपमा कार्यक्रमका बारेमा परिचित थिएन भन्दा घमण्ड कसरी हुन्छ ?
कुनै पनि संस्था र त्यसमाआवद्ध कर्मचारीहरु एकअर्कामा परिपुरक हुन्छन भन्दा के बिराए ? मैले इन्द्रेणीको कार्यक्रमका क्रममा शहरदेखि गाउँवस्तिका भिरपाखा धाएकी छु। २०औं जोर जुत्ता चप्पल फटाएकी छु।
केही पाएकी छु, केही गुमाएकी छु। जुन प्रक्रिया चलिरहने प्रक्रिया पनि हो । (भिडियो हेर्नुस)
Prevबजाजका मोटरसाइकल किन्नेलाई कम्पनीले ल्यायो यस्तो अफर अब ५०% डाउन पेमेटमा चाहेको बाइक पाइने
Next७० बर्षका श्रीमान २० बर्षकि श्रीमती,झ’ ल्कीयो सुमधुर प्रेम,आयो सिरियलमा अफ,र (भिडि’यो सहित)
नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ साउदी,कतार, मलेसिया लगायत देशको बिनिमय दर
आहा ! यसरी नेपाली संस्कारमै गरियो अमेरि`कन बेहुला र नेपाली छोरीको बिवाह (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)